Iipads zokuCoca ezomileyo, Isixhobo seDayimani, Ukusila kweDayimani- iBontai
Sisoloko sibambelela kwifilosofi yeshishini "yeemveliso ezintle, ukugaya okuhle, kunye nokugqwesa kwenkonzo enzulu".
2021 uyilo yakutshanje 3, ukusetyenziswa owomileyo diamond pol ...
7 Inch Double Row Diamond Ukusila Cup Wheels f ...
4, iinkumba-lock Diamond Edge Ukusila Wheel ...
27inch Ukutshisa idayimani iphedi wokucoca ukuba mak ...
3, intlaka diamond ipolishi pad ipolishi emanzi ...
4, nentlaka Diamond ipolishi zokubhala for isilinda ...
Fuzhou Bontai Diamond Izixhobo Co., Ltd yasekwa ngo-2010, kokuba umnini ngumenzi leyo ngokukodwa ukuthengisa, ukuphuhlisa kunye nokuvelisa zonke iintlobo izixhobo zedayimane. Sinezinto ezahlukeneyo zedayimani yokugaya kunye neepolishi zenkqubo yomgangatho wokucoca, ukufaka izihlangu zokugaya idayimane, iivili zekomityi yokusila yedayimane, iidiski zokugaya idayimane kunye nezixhobo zePCD. Ukusebenza ukusila iintlobo ezahlukeneyo zekhonkrithi, iterrazzo, imigangatho yamatye kunye neminye imigangatho yokwakha.
Indlela yokukhetha ikhonkrithi yokuguba iivili zekomityi
Ngomhla / 01/2021
1. Qinisekisa ubukhulu Ubungakanani obuqhelekileyo ubukhulu babasebenzisi basebenzisa u-4 ″, 5 ″, 7 ″, kodwa ungabona abantu abambalwa basebenzisa u-4.5 ″, 9 ″, 10 ″ njl. Isisiseko kwimfuno yakho nganye kunye neekona ozisebenzisayo. 2. Qinisekisa iibhondi ngokubanzi ...
Uvavanyo oluphathekayo lwekhonkrithi show bukhoma
Namhlanje sivavanye ikhonkrithi kuvavanyo lokuboniswa bukhoma, ubukhulu becala siqhathanisa ukuqaqamba kwe-3, ishumi elinambini icandelo lokucoca iphedi kunye ne-3-torx pad polishing. Eli licandelo le-3 ukuya kwele-12 lokucoca iphedi, ubukhulu be-12mm, ilungele ikhonkrithi eyomileyo kunye nomgangatho we-terrazzo. Iimpawu ezingama-50 # ...
Intlaka diamond iphedi wokucoca
Mar / 11/2021
Iipayipi zokubopha i-resin bond pads ziyenye yeemveliso zethu eziphambili, siye sikweli shishini iminyaka engaphezu kwe-10. Intsimbi yokubopha ipads yenziwa ngokudibanisa kunye nokutofa umgubo wedayimani, i-resin, kunye neefilitha emva koko zicinezelwe ngokucinezelwa kumatshini wokushicilela, emva koko zipholise kwaye zidilize ...
BONISA NGOKUPHELELEYO UKUQALISWA KWEZIXHOBO ZE-DIAMOND ENTSHA NGOMHLA WESI-9, MATSHI
Mar / 03/2021
Molo, wonke umntu, nantsi iFuzhou Bontai Diamond Tools Co; Ltd e-China, ingcali yezixhobo zedayimani ezinamava angaphezulu kweminyaka engama-30. Kuhle ukuba uqaphele ukuba siza kuba nomboniso weqonga eAlibaba ngomhla we-9, Matshi (Beijing Time), lo ngumboniso wokuqala ophathekayo esiwubambe emva kokuba ...
Amacandelo eBontai Diamond wokuSila
NgoJanuwari / 08/2021
Diamond lokusila ingxenye isoloko itolikwa njengedayimane yokuguba izihlangu ngabantu abaninzi. Ukuba ufuna idayimani yokuguba izihlangu, nceda ucofe ku-www.bontai-diamond.com Apha ikakhulu sichaza isixhobo sekhonkrithi esibizwa ngokuba yidayimani yokuguba, njengecandelo lekhonkrithi lokusila lekhonkrithi, imabhile, igranite kunye ...